Maalinta: Oktoobar 12, 2018
Golaha Magaalada Caasimadda ee 'Van Metropolitan Council' oo leh go'aanka ardayda iyo kaararka shaqsiyadeed ee gaadiidka dadweynaha Kaararka BELVAN ma heli doonaan lacagta fiisaha. Baarlamaanku wuxuu kaloo hoos u dhigay khidmadaha kaararka min 6 TL illaa 4 TL. Dawlada Hoose ee Magaalada 'Oktoobar [More ...]
Helitaanka Bandhigga buugaagta ee Eskisehir laga bilaabo Makhaayad
Eskişehir Dawlada Hoose ee Magaalo Weynaha ayaa taageero dhanka gaadiidka ah u soo bandhigtay Carwada Buugaagta Eskişehir oo loo qabtay markii labaad sanadkaan ayagoo wata ku dhawaad ​​toban kun oo arday. Waxaa loo abaabulay markii labaad sannadkan iyada oo la kaashanayo Dawladda Hoose ee Magaaladda, qorayaasha, guryaha daabacaadda iyo [More ...]
Cayirova Calaamadinta Cagaarka
Dawlada Hoose ee Magaalada Kocaeli, oo ahmiyada siisa sharciga cagaaran iyo deegaanka, ayaa sii wadata wax qabadkeeda gobolka oo dhan oo aan kala go ’lahayn. Isgoyska Çayırova, oo mashruuceeda waxaa soo saaray Dawladda Hoose ee Magaaladda waxaana ku ballaariyay wadooyin dheeri ah iyo wax soo saar kale oo ka socda wadooyinka waaweyn, [More ...]
Taageero buuxda ee Mashruuca ATSO
Ergada ATSO, oo ka kooban xubnaha Rugta Ganacsiga iyo Wershadaha Aksaray, waxay sii wadeen inay kahadlaan booqashadooda iyo mashruucyadooda, waxayna taageero buuxda kaheleen ururada aan dowliga ahayn ee gobolkayaga. Maareynta ATSO [More ...]
Tareenka Cusub ee Shiinaha iyo Ruushka
Waddo tareen oo cusub ayaa laga furay khadka Sino-Ruush. Tareenka, oo ka tagaya magaalada Delingha ee dalka Shiinaha, ayaa safarkiisa 12km 4345 maalmood gudahood u safri doona magaalada Barnaul ee dalka Ruushka. In loo isticmaalo gaadiid xamuul oo u dhexeeya Shiinaha iyo Yurub [More ...]
Nidaamka Tareenka fudud Nuxur ka yimid Gumrukcuoglu
Duqa magaalada Trabzon Orhan Fevzi Gumrukcuoglu, oo marti ku ahaa Haber61TV, ayaa sameeyay bayaan ku saabsan nidaamka tareenka fudud. Gümrükçüoğlu wuxuu sheegay in mashruuca nidaamka tareenka fudud uu dhamaaday isla markaana lagu soo daray barnaamijka Agaasimaha Guud ee Maalgashiga Kaabayaasha. [More ...]
Nidaamka Isgaadhsiinta 8 136 Milyan Qof Ayaa Loo Adeegay Sanadkiiba
Saldhigga - Khadadka khadka tareenka ee fudud ee Samsun, oo billowday socdaalkeedii ugu horreeyay ee u dhexeeya saldhigyada jaamacadda, ayaa loo xilsaaray 8. Dabaaldega sanad-guurada. 2010 by Dawlada Hoose iyadoo la soo bandhigayo nidaamka tareenka ee sanadka 8 [More ...]
Nidaamka Tareenka 8 ee Samsun
3. 9 Kumanaan Kaamirado Ammaanka Ah ee Madaarka!
Dood-wadaagyada ku saabsan furitaanka garoonka diyaaradaha 3-aad ayaa isu beddelay 9 kun oo kamaradaha amniga ah. Cengiz Semercioğlu, qoraa Hürriyet wuxuu sheegay in nidaamka leh 9 oo kaamirooyin loo adeegsan karo dayrka garoonka diyaaradaha. [More ...]
ASO Guddoomiyaha Özdebir: Saldhig Logistics waa Muhiim u ah Horumarinta Dhaqaalaha ee Ankara
Nurettin Özdebir, Madaxweynaha Rugta Wershadaha ee Ankara, ayaa ka qayb galay furitaanka Shirka Ankara ee Saadka iyo Cadaaladda. Isaga oo ka hadlaya furitaanka shir madaxeedka ASO Madaxweynaha Nurettin Özdebir, waaxda saadka ee dalkeena waxaa loo arkaa gaadiid, laakiin aragtidan ayaa ah mid gaabis ah. [More ...]
Safi Derince, dariiqa daruuriga ah: 'Ma naga maahna Ruhsata'
Duince Dagmada Cali Haydar Bulut qiimayn 4 sano ah ayaa lagu soo saaray war-saxaafadeed, Derince Safi Port Port ku saabsan codsiyada shatiga ee shaacinta, Safi Derince waxay ka timid ficil adag oo ka timid maamulka. Asal ahaan ka TCDD [More ...]
Shirkii Isuduwidda Gobolka ee Must
2018 Sanadka IV. Kulankii Gudiga Isuduwaynta Gobollada waxaa lagu qabtay shir gudoomiye kuxigeenka Muşaas Aziz Yıldırım. Shirka lagu qabtay Hoolka Shirarka ee Gudoomiyaha; Guddoomiyaha gobolka Aziz Yildirim, gudoomiye ku xigeenka Abdulkadir ok ok, maareeyayaasha gobolada, dawlada hoose ee degmada [More ...]
Turkey ayaa Metrobus u baahan tahay in la fuliyo ee Bursa
Turkey sii wadaan in ay koraan sannad kasta beerta ku farsamada. Sidaas awgeed, marka lagu daro horumarka laga sameeyay milatariga, waxaan bilaabeynaa inaan soo saarno alaabadayada qeybaha kale. meel walba oo farsamada ee Turkey [More ...]
Madaxwaynaha Trabzon kufsi wadada!
Wareegtada Madaxweyne Recep Tayyip Erdoğan ee ku saabsan Diyaargarowga Yatır form ee Barnaamijka Maalgashiga 2019-2021 yayım waxaa lagu daabacay Rasmiga rasmiga ah. Sida ku xusan wareegtada, mashaariicda aan si toos ah ugu adeegin baahiyaha deg-degga ah ee muwaadiniinta iyo kororka qiimaha lagu daro dhaqaalaha [More ...]